ट्याग: जाभास्क्रिप्ट | Martech Zone
वेबसाईटको गति किन महत्व छ र यसलाई बढाउने W तरिकाहरू
मंगलवार, मार्च 17, 2020 बिहीबार, मार्च ० 19, २०२० क्याथरिन होर्ने
के तपाईंले कहिल्यै ढिलो लोडिंग वेबपृष्ठ छोड्नुभएको छ, पछाडि बटन ट्याप गर्दै तपाईंले खोज्नु भएको जानकारी फेला पार्न? अवश्य पनि, तपाईंसँग छ; सबैको एक बिन्दु वा अर्को हुन्छ। जे भए पनि हामी मध्ये २%% ले पृष्ठ त्याग्नेछ यदि यो चार सेकेन्डमा लोड गरिएको छैन भने (र अपेक्षाहरू केवल समय बित्दै जाँदा बढ्दै जान्छ)। तर वेबसाईटको गतीले फरक पार्ने एकमात्र कारण यो छैन। गुगलको रैंकिंगले तपाईंको साइटको प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दछ
शुक्रबार, अगस्त 16, 2013 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
तपाईको व्यवसायमा पृष्ठ दृश्य कुरा के हो? के तपाईंलाई थाहा छ? के तपाईँ निश्चित हुनुहुन्छ? मलाई थाहा छ कहिलेकाँही हामी ट्राफिकको एक टन प्राप्त गर्छौं र यसले केही फरक पार्दैन, र अन्य समयमा हामी केहि उत्कृष्ट भ्रमणहरू पाउँछौं जसले ठूलो व्यापार सम्बन्धमा पुर्‍याउँछन्। मार्केटिंग सिद्धान्त त्यो भन्दा राम्रो छ त्यसैले हामी सबै नेतृत्व पछ्याउँछौं। तर के हामीसँग छ? हामी यसभन्दा पहिले कार्ययोग्य एनालिटिक्सको बारेमा लेख्दछौं - सदस्यता-आधारित व्यवसायहरूको लागि पाइरेट मेट्रिक्स जस्तो।